Global Voices teny Malagasy » Kambôdza: Ny Aloky ny Lasa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Avrily 2018 19:32 GMT 1	 · Mpanoratra Tharum Bun Nandika miora
Sokajy: Kambodza, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Tantara, Tsidika
Nisy zazalahy folo taona niaraka tamin'ny Khmer Rouge tamin'ny taona 1970, Nhem En no anarany. Nalefa nianatra momba ny saripika tao Shina izy, ary enin-taona taty aoriana dia lasa mpaka sary ny fahafatesana tao amin'ny tranombakoky ny fandripahana, Tuol-Sleng, ilay toerana nisy ny S-21. Tamin'ny 2001, nitantara momba ny asany teo aloha tamin'ireo mpanao gazety izy fa “nino foana izy ireo [ireo gadra] fa ho faty na hiatrika olana rehefa voasambotry ny Khmer Rouge. Koa lasa tarehy feno tebiteby sy maso feno alahelo ary tànana mifatotra rojo vy no azoko sary.” Mihevitra  i Macam-macam fa anisan'ny malaza indrindra nalainà Aziatika avy ao Atsimo Atsinanana anatin'izao vanimpotoan’ny loza maoderina misy antsika izao ireo sary ireo.
Ka nanao fiainam-baovao tany Amerika, Frantsa, Aostralia, Kanadà, ary tany amin'ireo firenena hafa manerana izao tontolo izao ny ampahany betsaka tamin'ireo mpifindramonina. Tsy maintsy miaina anatinà vondrompiarahamonina vaovao izy ireo ary mizatra miatrika ny lasa na eo amin'ny lafiny fisainana na eo amin'ny lafiny kolontsaina. I Puthearorth, Kambôdziana-Amerikana iray, izay nandao ny tanindrazany ho any Etazonia tamin'ny faha-14 taonany, dia nobeazina tamin'ny ankapobeny tanatin'ity tontolo vaovao ity, naharihary tamin'io kolontsaina vahiny io, ary tsy maintsy mizatra ny fomba fisainana sy ny fomba fiaina tsy amin'ny fomba tokana. Manasongadina  ny olana amin'ny maha-izy azy azy izy fa
Azo ampiasaina ho toy ny fitaovana ahafahan'ny olona mamoaka miadana ny tantarany , ny eritreriny, ary ny tsiaron’ny lasa ny bilaogy fifaneraserana roa-làlana. “Na dia Khmerikanina ihany aza no ahafahako mamaritra ny tenako, faran’izay sarotra ny mahatakatra ny tena dikan’izany “, hoy izy.
Roampolo taona mahery taty aorian'ny nionganan'ny fitondran'i Pol Pot, lasa fitaovana ho an'ireo sisampatin'i Kambôdza ravan'ny ady ny fanambarana an-gazety momba ireo olona tsy hita popoka. Mamaky gazety isan'andro isan'andro ilay bilaogera Mean Lux, manantena ny hahita ny anaran'ny dadatoany .
Ao Phnom Penh, misy mpizahatany vahiny iray manoritsoritra ny fiainana  anatin'ity renivohitra ity amin'ny fomba izay ahafahana manakatra ny fiainan’ny vahoaka Kambôdziana amin'ny ankapobeny. Nanatri-maso ankizy izay mila miasa noho ny fivelomana izy indray andro, ary nanoratra fa
Manasongadina ny toedraharaha misy ny firenena  i Julie D, fa “mihoatra ny 40% ny Kambôdziana tsy nandalo fianarana. Tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny ampahefany mahery amin’ny olon-dehibe. Aman’arivony ny ankizy na any an-drenivohitra na any ambanivohitra no tratry ny tsy fanjariantsakafo, tsy mahazo ny fanabeazana sahaza azy ary tsy manana ny fahafahana fototra raisintsika rehetra ho efa an-tànana.”
Manazava ny ady an-trano naharitra an-taonany amin'ireo vahiny mpizahantany amin'ny alàlan'ny zavakanto ny fampiratiana ao amin'ny “Tranombakoky ny Tany misy Vanja Milevona ” ao Siem Reap. Natsanganà miaramila Khmer Rouge teo aloha io tranombakoka io.” Ipetrahanà zaza am-polony mahery niharan'ny vanja ihany koa izy io.
Miteraka resabe ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ny lohatenim-baovao ao amin'ny New York Times hoe “Nahoana no mankany Kambôdza daholo ny olona”. Maneho ny heviny  i Keno, bilaogera Kambôdziana, “nahita lahatsoratra mahaliana aho raha nitety ny tranonkala androany, lahatsoratra vao nivoaka izay namaly ny mampiavaka an'i Kambôdza, sy ny antony mampitombo ny olona mitsidika eto”.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/06/114983/
 Colin Mutchler: http://colinmutchler.com/
 olona mamoaka miadana ny tantarany: http://www.radioopensource.org/cambodias-nascent-bloggosphere/
 manantena ny hahita ny anaran'ny dadatoany: http://cam-blog.blogspot.com/2006/02/keep-searching.html
 misy mpizahatany vahiny iray manoritsoritra ny fiainana: http://blogs.bootsnall.com/beaker/?p=94
 Manasongadina ny toedraharaha misy ny firenena: http://spaces.msn.com/juliedumbovich/Blog/cns!5ED66FB1F4D8FFCF!972.entry
 Tranombakoky ny Tany misy Vanja Milevona: http://www.cambodialandminemuseum.org/
 zaza am-polony mahery niharan'ny vanja ihany koa : http://miniprep.caltech.edu/~rql/journal/?p=109
 Maneho ny heviny: http://ekenno.blogspot.com/2006/02/why-is-everybody-going-to-cambodia.html